China Baron OEM & ODM Service (ngezifiso ilebula Izikhungo) Ukwakha futhi Factory | UBaron
I-Baron (China) Co. Ltd yatholakala ngo-2005. Le nkampani inikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo ezibandakanya ucwaningo lomkhiqizo nentuthuko, ukwakhiwa, ukukhiqizwa okugcwele, ukuthengisa kanye nezinsizakalo zamakhasimende, futhi unedumela eliqinile lokugqama kwekhwalithi yomkhiqizo, emisha kanye izinsizakalo zamakhasimende ngenkathi zikwazi ukuhlinzeka ngaso sonke isikhathi inani elingcono kakhulu kumakhasimende ethu.
UBaron wakhe izakhiwo ezijwayelekile kanye neworkshop ehlangabezana nezindinganiso zamazwe omhlaba kanye nolayini abayisishiyagalombili abaphambili bokukhiqiza inabukeni. Le nkampani isebenzisa imishini yokukhiqiza iHengchang neHanwei, okuyizinto eziphezulu kakhulu zemishini yokukhiqiza eChina. Imishini inesisindo esingu-100T futhi iqinisekisa ukusimama kwemikhiqizo yeBesuper. Ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwamakhompiyutha ayizigidi ezingama-800, okulingana neziqukathi ezingama-3300 40HQ.
UBaron uqashe ochwepheshe abahamba phambili bezocwaningo nentuthuko, abanolwazi lweminyaka engama-20 embonini yamanabukeni. Le nkampani inamalungelo obunikazi angaphezu kuka-23 kuzwelonke kumanabukeni futhi ihlale inikela emisha ukuze ikhiqize inabukeni eliphezulu lezinga eliphezulu.
Njengamanje, uBaron usethole izitifiketi ze-BRC, i-FDA, i-CE, i-BV, ne-SMETA yenkampani kanye nesitifiketi se-SGS, i-ISO ne-FSC semikhiqizo.
Uhlelo Lokugcina Izindlu
IBaron ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-33,050, enendawo yokwakha engama-29,328.57 square metres. Indawo yokugcina izimpahla ehlanzekile nebanzi engaphezu kwama-90,000 m³ ifakwe uhlelo lokulwa nomlilo nohlelo lokungenisa umoya ukuqinisekisa ukuphepha kwemikhiqizo. Ukuhlelwa kwendawo yokugcina kugcina ngokulandela amazinga wokuhlolwa kwefektri ye-BRC ne-BV. Indawo yokulethwa engaphezu kwamamitha-skwele angama-4000 ingamumatha ama-trailer ayi-10 ngasikhathi sinye.
Umhlinzeki Wempahla Yomhlaba Wonke
UBaron ubhekisisa kakhulu ikhwalithi yezinto ezibonakalayo. Le nkampani ihlangene nabanikezeli abaningi bezinto ezihamba phambili, kufaka phakathi iSumitomo, BASF, 3M, Hankel nezinye izinkampani zamazwe omhlaba zeFortune 500.
Isikhungo Sokulawula Ikhwalithi
UBaron wenze izivivinyo kuzo zonke izinto zokusetshenziswa, nemikhiqizo eqediwe ngesikhathi nangemva kokukhiqizwa ukuqapha ikhwalithi yomkhiqizo kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Okwamanje, izinqubo kanye nokuphathwa kwekhwalithi yenkampani kuqinisekiswe ngabantu besithathu bamazwe omhlaba, kufaka phakathi i-BRC, i-FDA, i-CE, i-ISO 90012008. Zonke izinsimbi zokuhlola zihlolwa yizinkampani ezinegunya kanye ngonyaka.
Namuhla, uBaron wenze intuthuko eminingi emikhiqizweni yezobuchwepheshe, kufaka phakathi amanabukeni e-bamboo fibre, amanabukeni amise okwe-T, amanabukeni we-core-thin-composite, le mikhiqizo ihlangabezana nezidingo zamakhasimende ngamanye namazinga ezimakethe zawo. Inabukeni le-eco-biodegradable baby elenziwe yinkampani lithathwa njengezinga eliphakeme kakhulu lokubola komhlaba emhlabeni futhi liyaziwa nasemazweni athuthukile afana ne-USA, UK, POLAND, AUSTRAILA njll.
Eminyakeni edlule, uBaron uzibophezele ekubeni ngumhlinzeki ohamba phambili emhlabeni wamanabukeni ezingane futhi anikeze inani elihlukile kubalingani bethu, ngaleyo ndlela sakhe isimo sokuwina kubhizinisi nakumakhasimende.
Langaphambilini Amanabukeni Okulala we-OEM / ODM Factory - I-Besuper Bamboo Planet Baby Diaper - IBaron
Olandelayo: I-Besuper Bamboo Planet Baby Inabukeni
Ibhulukwe le-Eco Pull-up diaper
Amabhulukwe eLady Diaper
Ikhekhe Lenhlanzeko Yabesifazane
ibhulukwe le-diaper lokudonsa
Inabukeni alahlwayo, I-Super Absorbency Adult Inabukeni, Ikhwalithi ephezulu ye-Eco, Inabukeni Elisanda Kuzalwa, Izingane Zisula Isikhumba Esibucayi, Inabukeni Baby,
Inabukeni alahlwayo, Izingane Zisula Isikhumba Esibucayi, Inabukeni Elisanda Kuzalwa, Ikhwalithi ephezulu ye-Eco, I-Super Absorbency Adult Inabukeni, Inabukeni Baby,